नगरपालिकामै छैन्, ‘भुकम्प प्रतिरोधी घर’ - Paschimnepal.com
नगरपालिकामै छैन्, ‘भुकम्प प्रतिरोधी घर’
दैलेख, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामै अहिलेसम्म भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएको छैन् । ग्रामीण बस्ती, नगरपालिकाको मुकाम जम्वुकाँध नयाँ ठाउँ । अहिलेसम्म नगरपालिकामै भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण नभएको हो ।
नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन् । भाँडामा नगरपालिकाको कार्यालय छ । त्यो भवन पनि भुकम्प प्रतिरोधी छैन् । विद्यालय र सरकारी भवनहरु पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको छ । अहिले नगरपालिकाले नगरमा सुरक्षित घरहरु बनाउँनका लागि कार्यक्रमहरु बनाएको छ । पहिलो चरणमा नगरबासीहरुलाई नयाँ बनाउनका लागेका घर भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने र घर बनाउने जनशक्ति (मिस्त्री) हरुलाई तालिमको आयोजना गरेको छ । सात दिने दक्ष मिस्त्रीलाई क्षमता विकास तालिमको आयोजना गर्दै भुकम्प प्रतिरोधी भवन तथा घर निर्माण सहयोगी हुने नगरपालिकाले जनाएको हो ।
नगर–प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले भुकम्प प्रतिरोधी भवन तथा घर निर्माण गर्नका लागि नगरपालिकाभित्र अव सहज हुने बताए । नगरपालिका घोषणा भएपनि भौतिक सरंचना निर्माणमा भुकम्प प्रतिरोधी हुन नसकेको बेला तालिमबाट सहज हुने उनको भनाई थियो । भुकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले भवन निर्माण मापदण्डको पालना गरी भवन निर्माण गरिनुपर्ने नगर प्रमुख शाहीले बताए । दैविक प्रकोप बाजा बजाएर नआउने भएकाले जुनसुकै बेला दैविक प्रकोप आउने भएकाले सबैले समयमै सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । भवन निर्माण मापदण्डलाई पुरा नगरी संरचनाहरु निर्माण गर्दा भुकम्प उच्च जोखिम हुने उनले बताए । ‘दक्ष मिस्त्रीहरुले संरचना निर्माण गर्दा भवन निर्माणका मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ ।’ नगर प्रमुख शाहीले भने, मापदण्डको पालना नगरी भवन निर्माण गर्दा भवन होइन, मसानघाट हुन सक्छ ।’ अब निर्माण गर्ने संरचना मसानघाट होइन, सुरक्षित संरचना बनाउनुहोस ।’ अहिलेसम्म नगरपालिकामा भुकम्पप्रतिरोधी घर बनेको छैन् । अव, बन्ने घरहरु भुकम्प प्रतिरोधी गराउन नगरपालिकाले तालिम लगायतका जनचेतना जार्गेना गर्ने काम गरेको छ । तालिमको आयोजना नगरपालिकाले गरेको हो ।
नगरपालिकाको विकास निर्माणमा कुनैपनि अवरोध नभएकाले निर्माण कार्य दु्रत गतिमा अघि बढेको छ । नगर प्रमुख शाहीले दक्ष मिस्त्री उत्पादन गर्ने तालिमको उद्घाटनमा भने, ‘नगरपालिकाले एक वडा एक मैदान, एक नर्सरी बनाउने नीति अनुरुप मैदान र नर्सरी स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाईएको छ ।’ कार्यक्रममा चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक विकले स्थानीय स्तरमै दक्ष मिस्त्र उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम संचालन गरिएको बताए । नगरपालिकामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा बाहिरबाट दक्ष मिस्त्री ल्याउन नपर्ने उनले बताए । वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष वखतबहादुर बोहोराको अध्यक्षतामा भएको तालिममा वडा नं. ४, ५ र ६ का दक्ष मिस्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आगामी जेठ १ गतेसम्म संचालन हुन तालिममा प्रशिक्षण नगरपालिकाका सव–ओभरसियर प्रकाश शाहीले दिने असिष्टेन सव–ओभरसियर लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । संरचनालाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि वडा नं. १, २ र ३ को चाल्ले चौतारा र वडा नं. ७,८,९ विन्द्रासैनीमा तालिम सम्पन्न भईसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । सवै वडामा भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि मिस्त्रीहरुलाई तालिम दिईएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ ३, २०७६ 11:22:07 AM
Prevलाइसेन्स नेपालीकरण नहुँदा समस्या
Nextडोल्पाका दुई गाउँपालिका, जहाँ फोन गर्न चढ्नुपर्छ हिमाल